Dukumiintiyada TÜLOMSA Requ ee Loogu Dalbaday Qorista Shaqaalaha Joogtada Ah Ayaa Lagu dhawaaqay | RayHaber | raillynews
[31 / 01 / 2020] Badeecad cusub oo laga soo bilaabo KARDEMİR iyo qaybta tareenka	78 Karabuk
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirTÜLOMSAŞ waxay soo bandhigtay Dukumiintiyada Lagu Codsaday ee Qorista
12 / 06 / 2019 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, Shaqooyinka, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, Tulomsas, TURKEY
tulomsas dukumintiyada joogtada ah ee loo codsaday qorista shaqaalaha
Turkey tareenka iyo Engine Industry (TÜLOMSAŞ) by dhawaaqay a qorista cusub oo joogtada ah waxaa la daabacay ee guusha kama dambaysta ah ee musharrixiinta ka mid ah liiska dokumentiyada la codsaday iyo habraacyada shaqa qorista iyo mabaadi'da in geeddi-socodka lagu dhawaaqay.
Turkey tareenka iyo Engine Industry (TÜLOMSAŞ) ee macnaha guud ee ku dhawaaqay qorista joogto ah la sii daayay TEO dhawaaqay waraaqaha ka musharaxiinta liiska kama dambaysta ah ee guulaha loo baahan yahay.
Sidaa darteed, TÜLOMSAŞ waxay codsatay in dukumiintiyada loo gudbiyo inta u dhaxaysa 17 Juun 2019 iyo 18 Juun 2019 ...
Asal ahaan iyo koobi diblooma
Aqoonsiga Aqoonsiga Aqoonsiga iyo Sawirka Koobiga
Xaqiijinta Taariikhda (Dukumeenti laga Helay Nidaamka Dawlada Hoose waa la aqbali doonaa)
Dukumentiga Dhimashada Adeega ee caymiska (Dukumeentiga laga helay Nidaamka Dawlada Hoose waa la aqbali doonaa)
2 Pieces Photo (Laga soo bilaabo lixdii bilood ee la soo dhaafay)
Diiwaanka Diiwaanka Dembiyada (Dukumeentiga laga helo Nidaamka Dawlada Hoose waxaa la aqbali doonaa) (Kuwa leh go'aanka maxkamada waxay keenaysaa dukumenti go'aanka)
Asal iyo Sawireed ee Dukumanka Mudnaanta leh
2018 Sanad Kpss Imtixaanka Imtixaanka Imtixaanka
Foomka Codsiga Shaqada iyo Foomamka Macluumaadkahttps://www.tulomsas.com.tr Qaybaha digniinta waa la buuxin doonaa. "
DETAILS: "https://www.tulomsas.com.tr/tulomsas-daimi-isci-alim-ilani/duyuru/182/Inde Waxay ku taal cinwaanka internetka.
TURKEY tareenka IYO WADIDDA Warshadaha DHEXAYSA Stock SHIRKADDA SHAQAALAHA WAA INAY CODSATAY IN Agaasinka Guud MABAADIIDA IYO HABRAACA QAADAY SAABSAN XEERARKA THE
ARTICLE 1 - (1) Ujeedada xeerkan waa: Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation baahan yahay Agaasinka Guud ee shaqada shaqaalaha shaqaalaha la kiraystay doono markii ugu horeysay, si loo go'aamiyo nidaamka iyo mabaadii'da ku saabsan martiqaadka musharixiinta, habka baaritaanka iyo qiimeynta natiijooyinka, go'aanka miisaaniyadda asalka ah iyo kuwa beddelka ah, meelaynta bedelka iyo ku dhawaaqidda natiijooyinka musharraxiinta.
ARTICLE 2 - (1) Tani Directive Turkey tareenka iyo Engine Industry Xarunta Corporation ee ku saabsan habka shaqaalaynta la musharaxiinta soo codsada in ay shaqaalaha ka shaqeeya oo daboola mabaadii'da nidaamka ah.
QODOBKA 3 - (1) Tilmaamahan waxaa loo diyaariyey iyadoo loo eegayo Qodobka 9 ee Xeerka Habraaca iyo Mabaadii'da lagu dabaqayo shaqaalaynta shaqaalaha hay'adaha dawliga ah iyo ururada lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee 8 / 2009 / 27314 iyo lambarka 17.
QODOBKA 4 - (1) Tilmaamahan;
a) Wasaaradda Hantidhowrka iyo Maaliyadda,
b) TEO: Authority Business Turkey,
c) Ganacsiga: Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation General Directorate,
d) Nidaaminta: Nidaamka Xeer-dejinta iyo Mabaadi'da ku lug leh qorista shaqaalaha ee hay'adaha dawliga ah iyo ururrada kuwaas oo dhaqangaliyay kadib markii lagu daabacay Xogta rasmiga ah ee 9 / 8 / 2009 iyo lambarka 27314
ARTICLE 5 - (1) Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation General Directorate of shaqaalaha si loo go'aamiyo sida tirada dadka, iyo gacanta arts of baahida loo qabo iyo oggolaansho ka wasaaradda in la bilaabo hanaanka loo baahan this, Waaxda Shaqaalaha ee waa buuxsamay Madaxtooyada.
QODOBKA 6 - (1) Shuruudaha loo rabo shaqaalaha loo shaqaaleysiiyo waxaa go'aaminaya Waaxda Shaqaalaha waxaana loo gudbiyaa ISKUR si loogu dhawaaqo. Waaxda Shaqaalaha State ayaa sidoo kale ku dhawaaqay qorista iyo Turkey tareenka iyo website Engine Industry Corporation rasmiga ah ee Agaasinka Guud (tulomsas.com.t) iyo faafinta rasmiga ah lagu faafiyo.
(2) Ku dhawaaqida codsiyada qorista shaqaale ee IŞKUR iyo go'aaminta codsadayaasha badan iyo / ama baaritaan waa in la fuliyaa si waafaqsan qodobada Xeerka.
Diiwaangelinta dokumentiga iyo xakamaynta dokumentiga
ARTICLE 7 - (1) bixinta Document iyo gacan ku haynta document taariikhda dhalidda ka mid ah liiska waraaqaha loo baahan yahay oo loo baahan yahay in la buuxiyey nooca "Shuruudaha Business iyo Form Macluumaadka" (sawirka) Waaxda Shaqaalaha by Turkey tareenka oo si rasmi ah Engine Industry Corporation General Directorate bogga (tulomsas.com.tr). Ma jiro wargalin dheeri ah oo loo diro musharrixiinta arrintan ku saabsan.
(2) waraaqaha Musharaxiinta Turkey tareenka iyo Engine Industry la sameeyey shakhsi by taariikhaha daabacay bogga internetka ee Joint Stock Company Agaasinka Guud.
(3) Dukumiintiyadu waa la aqbalaa iyagoo saxiixaya foomka soo gudbinta dukumeentiga. Dukumentiyada aan dhameystirneyn, macluumaadka qaldan iyo dukumintiyada kale ee aan ku haboonayn sababo kale lama aqbalayo xaaladdaan waxaa diiwaangeliyay Waaxda Shaqaaluhu iyadoo qoraal ah.
(4) Codsadayaasha codsanaya IŞKUR waxaa baari doona Waaxda Shaqaalaha inta lagu jiro habka loo soo gudbiyo dokumantiga.
(5) Waxay muujineysaa meesha, taariikhda iyo waqtiga imtixaanka ee shakhsiyaadka dukumentigoodu ay u qalmaan "Shahaadada Imtixaanka Imtixaanka Imtixaanka waxaa bixiya Waaxda Shaqaalaha.
Codsashada liis dheeraad ah
QODOBKA 8 - (1) Waaxda Shaqaaluhu waxay codsan kartaa liis dheeraad ah oo ka imanaysa ISKUR haddii ay dhacdo dalab aan ku filnayn ama tiro yar oo musharixi ah oo dhammaystiran dhammaadka geedi socodka soo gudbinta.
(2) Nidaamka ku saabsan liiska dheeraadka ah waa in la fuliyaa si waafaqsan qodobbada Xeerka.
(3) liis dheeraad ah ee musharrixiinta u qalma in ay galaan Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation General Directorate web site rasmi ah (tulomsas.com.t) waxaa lagu dhawaaqi doonaa. Musharrixiinta looma ogeysiiyo arrintan.
(4) xawaalad in la sameeyo marka la eego habka bixinta warqadaha musharixiinta, Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation ayaa lagu dhawaaqi doonaa website-ka rasmiga ah ee Agaasinka Guud.
Sameynta guddi baaritaan
QODOBKA 9 - (1) Guddiga imtixaanka waxaa go'aamiya Agaasinka Shaqaalaha ee Waaxda Shaqaalaha oo aan ka yarayn 3 iyo aan ka badnayn 5 sida ku cad nooca shaqada, tirade goobaha shaqo ee musharraxiinta loo shaqeynayo iyo tirada musharixiinta. Xubin kale ayaa loo magacaabaa mid kasta oo ka mid ah xubnaha guddiga.
Imtixaanka iyo qiimeynta
ARTICLE 10 - (1) Document abuurayaa musharaxiinta loo arko iyo / ama goobta imtixaanka ku haboon, taariikhda iyo waqtiga Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation General Directorate web site rasmi ah (tulomsas.com.t) waxaa lagu dhawaaqi doonaa.
(2) Nidaamka Xeer-maamuleedka iyo Mabaadi'da lagu dabaqayo shaqaalaynta hay'adaha dawliga ah iyo ururada, guddiga baadhista ayaa go'aamin doona baaritaanka waafaqsan nidaamka qoran iyo / ama afka.
Qiimeynta iyo ku dhawaaqida natiijooyinka
ARTICLE 11 - (1) Haddii labadaba qoraallo qoraal ah iyo hadal afka ah la wada isticmaalo, codsadayaasha qaata imtixaanka waxaa lagu qiimeeyaa dhibcaha 100. Qeybta dhibcaha ee 50 ee qiimeynta waxay ka timid imtixaanka qoraalka ah; 50 waxay ka kooban tahay imtixaan afka ah oo ku saabsan mawduucyada la xiriira aqoonta iyo xirfadaha xirfadeed.
(2) Haddii ay dhacdo imtixaan afka ah, codsadayaasha waxaa lagu qiimeeyaa dhibcaha 100. Baaritaanka afka wuxuu ku salaysan yahay mawduucyada la xiriira aqoonta iyo xirfadaha xirfadeed.
(3) Iyadoo ay sabab u tahay qiimeynta, tirada musharixiinta loo shaqeynayo laga bilaabo ugu sareeya si loo helo dhibcood ayaa lagu dhawaaqaa sida guuleystaha ugu weyn. Intaas waxaa sii dheer, musharrixiinta beddelka ah waxaa go'aaminaya tirada musharaxiinta dhabta ah ee tartamaya marka la eego dhibcaha dhibcaha. Musharaxiinta ku guuleystay Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation General Directorate web site rasmi ah (tulomsas.com.t) waxaa lagu dhawaaqi doonaa. Musharrixiinta looma sheegayo si gooni ah.
(4) Waaxda Shaqaalaha waxay ku wargelisaa IŞKUR liiska shan maalmood gudahood kaddib marka lagu dhawaaqo natiijooyinka imtixaannada sida kuwa asalka iyo kuwa beddelka ah iyo kuwa ku guuldareystay iyo haddii aan la qaadin imtixaanka.
(5) Musharrixiinta waa inay diidaan diidmadooda Waaxda Shaqaalaha qoraal ahaan maalmaha 5 laga bilaabo taariikhda ogeysiinta. Diidmooyinka waa in la baaraa lana xalliyaa maalmaha shaqada 5 laga bilaabo dhammaadka muddada rafcaanka. Natiijada diidmada waa in lagu wargaliyaa musharaxa qoraal ahaan. Diidmada (s) of qiimaynta haddii wax badalina uma liiska natiijada, Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation General Directorate web site rasmi ah (tulomsas.com.t) waxaa ku dhawaaqay liiska hadda.
Mushaharadu waxay bilaabaan shaqo
ARTICLE 12 - (1) Imtixaanka guuleystay musharaxiinta, shaqaalaha la asalka ah ee waraaqaha loo baahan yahay in Xafiiska Madaxtooyada ee taariikhda ku cad Turkey tareenka iyo Engine Industry codsan doonaa in ay xarunta Corporation ah, shaqaalaha loo wakiishay doonaa by the Department of baaritaan ammaanka iyo bilaabi doonaa shaqada ku salaysan natiijooyinka cilmi-arkiifiyo. Musharrixiinta loo arko inay yihiin kuwo aan ku habooneyn sababtoo ah baaritaanka amniga iyo cilmi baarista ma bilaabi doonto shaqo xataa haddii ay ku guuleystaan ​​imtixaanka.
(2) Musharixiinta ka gudubta imtixaanka ayaa yeelan doona alar Kali wuxuu shaqeyn karaa shaqooyinka khatarta ah wuxuuna shaqeeyaa habeenkii gudaheeda warbixinta guddiga caafimaadka in ay ka heli doonaan isbitaalka buuxa. Musharrixiinta aan haysanin ereyga lagama maarmaanka u ah warbixintooda ma bilaabi doonaan shaqo.
(3) Lambarka diiwaangelinta waxaa la siiyaa shaqaalaha si ay u bilaabaan Waaxda Shaqaalaha.
(4) Wargelinta qorista ee IŞKUR waa in lagu fuliyaa si waafaqsan qodobada Xeerka.
(5) Musharaxa ugu dambeeya waxaa loogu yeeraa Waaxda Shaqaaluhu inay beddelaan musharaxa aan bilaabin shaqada ama is casilay muddada tijaabada ama heshiiska shaqada oo la joojiyay sabab kasta oo isku mid ah. Musharaxa diiwaangashan waxaa lagu ogaysiinayaa boostada diiwaangashan.
Qodobka 13 - (1) Xaaladaha aysan jirin wax tilmaam ah oo ku saabsan Dastuurkan, qodobada Nidaamka Xeer-dejinta iyo Mabaadiida Dalbashada Shaqaalaha Hay'adaha iyo Ururada Dadwaynaha ayaa khuseyn doona.
QODOBKA 14 - (1) Tilmaamahan wuxuu dhaqan galayaa taariikhda ...... / ......
ARTICLE 15- (1) Qodobada this Directive Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation oo fulinaya Maamulaha guud. (Kamupersonel ah)
TULOMSAS KPSS 2019 / 1 Meelaynta Dhexe Dhexdeeda Wajigeeda Dukumentiyada Loo Baahan Yahay La dhawaaqay!
Mashruuca tareenka ee ay soo qaban qaabiyeen jaamacada Giresun iyo Giresun TSO…
Dalabka barafka sariirta ee Palandökende ayaa kordhay
Dadka jecel carruureed oo jecel Sarıkamış waxay doonayaan iftiin habeenkii ah
Taxanaha gaadiidka wadooyinka caalamiga ah ee bisha September
Dukumintiyada Looga Yeeray Shaqaaleynta TÜLOMSAŞ Shaqaalaha
TÜLOMSAŞ shaqo qorista shaqaalaha joogtada ah
Imtixaanka Habboonida: Diyaargarowga imtixaanka CCNP R & S
Codsiga ESHOT Mobile waa la cusbooneysiiyay